आफ्नै ‘साइबर सेनाकै कारण सार्वजनिकरुपमै प्रधानमन्त्रीको भयो यस्तो ‘लाज’, अब के गर्लान ? — Imandarmedia.com
आफ्नै ‘साइबर सेनाकै कारण सार्वजनिकरुपमै प्रधानमन्त्रीको भयो यस्तो ‘लाज’, अब के गर्लान ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो फेसबुक टाइमलाइनमा राखेको नारा छ– सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने । तर, ‘सत्यसँग नलड्ने’ उनै ओली शुक्रबार नारायणहिटी अगाडि भएको आमसभामा भने ‘फेक न्युज’को शिकार बने ।
प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले आयोजना गरेको आम हड्तालको निन्दा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘फेक न्युज’ को सहारा लिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आम हड्तालको विरोध गर्दै भने, ‘सडकभरि तरकारी पोख्ने, ट्याक्सी जलाउने, के यही हो व्यवस्था ?’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको सडकमा तरकारी पोखिएको घटना बिहीबारको हडतालमा भएको होइन । बन्दका आयोजकहरुलाई बदनाम गर्न भाइरल बनाइएको तरकारी पोखिएका तस्वीरहरु बिहीबारका होइनन् ।
प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गरेका कुनै पनि दृश्यहरु प्रचण्ड–माधप समूहसँग सम्बन्धित छैनन् । साइबर सेनाहरुले बिहीबार प्रचण्ड–माधव समूहलाई बदनाम गर्नका लागि सार्वजनिक गरेका फेक तस्वीरमध्ये एउटा थियो- नापी विभागदेखि नयाँ बानेश्वर छिर्ने सडकमा छरपस्ट तरकारी छरिएको दृश्य । तर, उक्त सडक आसपासका स्थानीयले बिहीबार दिनभर सडकमा कुनै पनि तरकारी नफ्याँकिएको बताइसकेका छन् ।
त्यस्तै घिरौँला सडकमा फ्याँकिएको अर्को तस्वीर सर्लाही लालबन्दीका किसानले बिक्री नभएको तरकारी सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गरेको तस्वीर हो, त्यो पनि दुई वर्ष पुरानो ।
तरकारी फ्याँकिएको तेस्रो फोटो भने भारतको हो । तर, आमसभामा प्रधानमन्त्री ओली भ्रममा परेको प्रष्ट देखियो । किनभने, बूढीआमैको तरकारी फ्याँकेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप आफ्नै साइबर सेनाले फैलाएको भ्रममा आधारित थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै बिहीबारको आम हडतालका बेला एउटा ट्याक्सी जलाइएको घटनाचाहिँ सत्य नै हो ।
प्रधानमन्त्री भन्दा पहिले आमसभालाई सम्वोधन गरेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेले गरी खाने नागरिकको ट्याक्सी जलाएकोप्रति घोर भत्र्सना गर्दै पीडितलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिने आश्वास दोहोर्‍याए ।
बिहीबार जलेको ट्याक्सीको क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन ओली र पोखरेलले दिएता पनि दुई वर्षअघि बालकुमारीमा जलेको ट्याक्सीका चालकले अहिलेसम्म कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । आफ़्ब्नै साइबर सेनाले फैलाएको हल्लाका कारण ओलीको सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘लाज’ भयो ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू गणतन्त्र र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्। नेकपाको ओली समूहले शुक्रबार नारायणहिटी दरबारअगाडि आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कतिपयले आज बिहानसम्म पनि ओलीले राजतन्त्र फर्काउँछ रे भन्ने हल्ला फैलाएको बताए।